မကြာခဏ မေးလေ့ရှိသည့် မေးခွန်းများ
အရည်အသွေး အကောင်းဆုံးသောဂိမ်းစ်များကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် အကန့်အသတ်မရှိ ကစားနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
Goama|Games ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လို ရယူရမလဲ။
ဤနေရာသို့ သွား၍ https://mm.gogames.co "စရန် " ကိုနှိပ်ပါ သင် တယ်လီဖုန်းလိုင်းနှင့်အသုံးပြုပါက သင် အသုံးပြုသည့် တယ်လီဖုန်းလိုင်းအမျိုးအစားကို အလိုလျောက် သိပါမည် ။ Wifi နှင့် အသုံးပြုပါက သင်အသုံးပြုလိုသော လိုင်းကို ရွေးချယ် ၍ သင် အသုံးပြုလိုသော ဝန်ဆောင်မှု ကို ရွေးချယ် ရယူပါ ။
ဝန်ဆောင်မှု ကုန်ကျစရိတ် ဘယ်လောက်ရှိနိုင်မလဲ ?
သင်ရွေးချယ်ထားသော လိုင်းအမျိုးအစားအလိုက်ကွာခြားမှုရှိနိုင်ပါသည် ၊အနည်းဆုံး တရက် ကို ၉၉ ကျပ် မှ စတင်ပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှု ကုန်ကျစရိတ်ငွေ ကို ဘယ်လိုပေးဆောင်ရမလဲ။
ဖုန်းဘေလ် (သို့မဟုတ်) အခြား ငွေလွှဲ ဝန်ဆောင်မှုများ မှ တဆင့် ပေးချေနိုင်ပါသည်။
ဂိမ်း ကို ဘယ်လိုဆော့ မလဲ ?
Goama|Games ဝက်ဆိုဒ် တွင် ပါဝင်သော နှစ်သက်ရာ ဂိမ်းကို “ကစားရန်" နှိပ်ပီး ကစားနိုင်ပါသည် ။
"Goama|Games "ကို I phone နှင့်အသုံးပြု၍ ကစားနိုင်ပါသလား ?
Goama|Games ဝက်ဆိုဒ် တွင် ဆော့နိုင်သောဂိမ်းများကို Android နှင့် iOS အမျိုးအစားဖုန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။
"Goama|Games "တွင် App အမျိုးအစားသီးသန့် ရှိပါ သလား။
Android ဖုန်းများအတွက်သာ "Goama|Games App "သီးသန့်ရှိပါသည်။
"Goama|Games App "ကို ဘယ်လို ရယူနိုင်ပါ သလဲ ?
ဝက်ဆိုဒ် ပေါ်တွင်ဝန်ဆောင်မှု ယူ၍ အသုံးပြုသူများ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သော ဂိမ်းမှာ ပါရှိသည့် "Goama|Games App "ကို ရယူရန်ရွေးချယ်မှုများပေးထားပါသည် ။
Goama|Gamess Android app အတွင်းမှာရှိသော support menu မှတဆင့် ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်တန့်နိုင်ပါသည်။
Android app အတွင်းမှ Game များ ဘာလို့ download လုပ်လို့မရလဲ
အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းရင်းတခုခုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်
မိမိဖုန်း၏ လက်ကျန် storage နေရာစစ်ကြည့်ပါ။ နေရာမလုံလောက်ရင် download လုပ်လို့မရပါ။
မိမိ၏ဖုန်းလိုင်း သီု့ Wi-fi ကိုစစ်ကြည့်ပါ။ Internet ချိတ်ဆက်မှုမကောင်းရင် download လုပ်လို့မရပါ။
မိမိဖုန်း၏ setting ကိသွားပါ၊ ဖုန်းအမျိုးစားပေါ်မူတည်၍ "security device administration" သို့ "privacy" ကိုရွေးပါ၊ ထိုနေရာတွင် "Unknown sources" ကိုခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Play Store ကမဟုတ်တဲ့ အခြား application များထည့်လို့ရပါပြီ။
Subscription cancel လုပ်လိုက်ပါက downloadလုပ်ထားသော gameများကို ဆော့၍ ရပါသေးလား။
Game သည် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဆက်စပ်ထားသောကြောင့် ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်တန့်လိုက်ပါက download လုပ်ထားသော game များကို ဆော့၍ ရတော့မည်မဟုတ်ပါ။
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၊ ဒူဘိုင်းမြို့၏ ဥပဒေများအရ မှန်မှန်ကန်ကန် တရားဝင်ဖွဲ့စည်း၍ မှတ်ပုံတင်ထားပြီး စာတိုက်သေတ္တာ အမှတ် 293816၊ Dubai World Trade စင်တာတွင် ရုံးချုပ် တည်ရှိသည့် ပေးရန်တာဝန် ကန့်သတ်ထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Miaki & co. Ltd (Miaki အဖြစ် ရည်ညွှန်းထားသည်) မှ သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များ အပါအဝင် အချို့သော အချက်အလက်များကို စုစည်းရယူမှု၊ အသုံးပြုမှုနှင့် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သင့်ရွေးချယ်မှုများအကြောင်း အပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒတွင် ရှင်းပြထားပါသည်
သင့်အကောင့် သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များ၊ ကွတ်ကီးများ သို့မဟုတ် အခြားနည်းပညာများကို ကျွန်ုပ်တို့က အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အထွေထွေ မေးခွန်းများ မေးမြန်းလိုပါက support@gogamesapp.com တွင် အီးမေးလ်ပို့၍ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖော်ပြပါကဲ့သို့ သင့်အကြောင်း အချက်အလက်များကို လက်ခံသိမ်းဆည်းထားပါသည်-
သင်က ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပံ့ပိုးပေးသည့် အချက်အလက်များ အောက်ပါတို့ အပါအဝင် သင်က ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပံ့ပိုးပေးသည့် အချက်အလက်များကို စုစည်းရယူပါသည်-
သင့်အမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းနှင့် ဖုန်းနံပါတ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်က ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေစဉ် အချက်အလက်များ ရိုက်ထည့်လိုက်ချိန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုချိန် သို့မဟုတ် စစ်တမ်းများ သို့မဟုတ် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး အရောင်းမြှင့်တင်မှုများတွင် ပါဝင်ချိန် အပါအဝင် ဤအချက်အလက်များကို နည်းလမ်းများစွာဖြင့် စုစည်းရယူပါသည်၊
သုံးသပ်ချက်များ သို့မဟုတ် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ အကောင့်ဆက်တင်များကို ပေးရန်၊ သင့်အကောင့်တွင် လိုလားသည့် နည်းလမ်းများကို သတ်မှတ်ရန် သို့မဟုတ်ပါက အခြားတစ်နည်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် အခြားဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ အချက်အလက်များ ပေးရန် ရွေးချယ်လိုက်ချိန်တွင် အချက်အလက်များ။
ကျွန်ုပ်တို့ အလိုအလျောက် စုစည်းရယူသည့် အချက်အလက်များ- ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို သင် သုံးစွဲမှု၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြော်ငြာအပေါ် သင်၏ တုံ့ပြန်မှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များအပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို ဝင်ရောက်သုံးစွဲရန် အသုံးပြုထားသည့် သင့်ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် အခြားကိရိယာ (မိုဘိုင်းကိရိယာများကဲ့သို့)နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များကို စုစည်းရယူပါသည်။ ဤအချက်အလက်တွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
ခေါင်းစဉ် ရွေးချယ်မှုများ၊ ကစားမှု မှတ်တမ်းနှင့် ရှာဖွေမှု အချက်အလက်များကဲ့သို့ Goama|Games ဝန်ဆောင်မှုပေါ်တွင် သင်၏ လုပ်ဆောင်ချက်၊
ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်သည့် ရက်စွဲ၊ အချိန်နှင့် အကြောင်းရင်း၊ ချတ်တင် ပြောဆိုမှုမှန်သမျှ၏ မှတ်တမ်းများနှင့် သင်က ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖုန်းခေါ်ပါက သင့်ဖုန်းနံပါတ်နှင့် ဖုန်းအသံသွင်းဖိုင်များကဲ့သို့ ဖောက်သည် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် သင် အပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုများ၏ အသေးစိတ်၊
ကိရိယာ ID များ သို့မဟုတ် အခြားသီးသန့် အမှတ်သင်္ကေတများ၊ ကိရိယာနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲ သွင်ပြင်လက္ခဏာများ (အမျိုးအစားနှင့် စီစဉ်သတ်မှတ်မှုကဲ့သို့)၊ ချိတ်ဆက်မှု အချက်အလက်များ၊ စာမျက်နှာ ကြည့်ရှုမှုများဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ၊ လွှဲပြောင်းပေးသည့် URL များ၊ IP လိပ်စာ (သင်၏ ယေဘုယျ တည်နေရာကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောနိုင်သည်)၊ ဘရောက်ဇာနှင့် ပုံမှန် ဝဘ်ဆာဗာ မှတ်တမ်း အချက်အလက်များ၊
ကွတ်ကီးများ၊ ဝဘ်ဘီကွန်များနှင့် (ကြော်ငြာများ ရရှိနိုင်မှုနှင့် ပေးပို့မှု၊ ဝဘ်ဆိုက် URL အပြင် ရက်စွဲနှင့် အချိန်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကဲ့သို့) ကြော်ငြာ ဒေတာ အပါအဝင် အခြားနည်းပညာများမှတစ်ဆင့် စုစည်းရယူထားသည့် အချက်အလက်များ။ နောက်ထပ် အသေးစိတ်ကို သိရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကွတ်ကီးများနှင့် အင်တာနက် ကြော်ငြာကို ကြည့်ပါ။
အခြားအရင်းအမြစ်များမှ အချက်အလက်များ- ကျွန်ုပ်တို့သည် အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များကို အွန်လိုင်းနှင့် အော့ဖ်လိုင်း ဒေတာပံ့ပိုးသူများထံမှ အပါအဝင် အခြားအရင်းအမြစ်များမှ ရရှိထားသည့် အချက်အလက်များဖြင့် ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ဖြည့်စွက်အချက်အလက်များတွင် လူဦးရေ အချက်အလက် ဒေတာ၊ စိတ်ဝင်စားမှုကို အခြေခံထားသည့် ဒေတာနှင့် အင်တာနက် လေ့လာကြည့်ရှုမှု အပြုအမူများ ပါဝင်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်၊ စီမံခန့်ခွဲရန်၊ ပိုကောင်းအောင် အဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့် တစ်ဦးချင်းအကြိုက် လုပ်ဆောင်ပေးရန်၊ သင်၏ စာရင်းသွင်းမှု၊ သင့်အော်ဒါများနှင့် ငွေပေးချေမှုများကို စီမံဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဤအကြောင်းအရာများနှင့် အခြားသော အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်နှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန် အချက်အလက်များကို အသုံးပြုပါသည်။ ဥပမာ ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အချက်အလက်များကို အသုံးပြုပါသည်-
သင်၏ ယေဘုယျ မြေမျက်နှာပြင် တည်နေရာကို ဆုံးဖြတ်ရန်၊ သင့်ဒေသနှင့် ဆီလျော်လိုက်ဖက်သည့် အကြောင်းအရာကို ပံ့ပိုးပေးရန်၊ နှစ်သက်နိုင်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယူဆသော Goama|Games အကြောင်းအရာများအတွက် စိတ်ကြိုက်မွမ်းမံ၍ တစ်ဦးချင်း အကြိုက်လုပ်ဆောင်ထားသည့် အကြံပြုချက်များကို သင့်အား ပံ့ပိုးပေးရန်၊ သင့်အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးရေး ကုမ္ပဏီကို စိစစ်ရန်နှင့် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများနှင့် တောင်းဆိုချက်များကို မြန်ဆန်ထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်နိုင်ရန်၊
လိမ်လည်မှုအပါအဝင် တားမြစ်ရနိုင်သော သို့မဟုတ် တရားမဝင်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို တားမြစ်ရန်၊ စုံစမ်း စစ်ဆေးရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းမျဉ်းများကို ပြဋ္ဌာန်းရန် (အခမဲ့ အစမ်းသုံးခွင့်ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့)၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရိသတ်များကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာ၍ နားလည်လာရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှု (ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူ ကြားခံစနစ် အတွေ့အကြုံများ အပါအဝင်) ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်နှင့် အကြောင်းအရာ ရွေးချယ်မှု၊ အကြံပြုချက် နည်းစနစ်များနှင့် ပေးပို့မှုကို အကောင်းဆုံး ချိန်ညှိရန်၊
Goama|Games တွင် ရနိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များနှင့် အကြောင်းအရာအသစ်များ၊ အထူးကမ်းလှမ်းချက်များ၊ အရောင်းမြှင့်တင်မှု ကြေညာချက်များနှင့် သုံးစွဲသူ စစ်တမ်းများဆိုင်ရာ Goama|Games ၏ အသေးစိတ် အချက်အလက်များအကြောင်း သတင်းများကို သင့်ထံ ပေးပို့နိုင်ရန် (ဥပမာ- အီးမေးလ်၊ အလိုအလျောက် ပေးပို့သော အသိပေးချက်များ၊ စာသား မက်ဆေ့ချ်ပို့ခြင်းနှင့် အွန်လိုင်း မက်ဆေ့ချ်ပို့သည့် ချန်နယ်များဖြင့်) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သင့်ကို ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်နှင့် စကားဝှက် ပြန်သတ်မှတ်ရန် တောင်းဆိုချက်များကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ချက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တောင်းဆိုချက်များတွင် သင့်ကို ကူညီပေးရန်။ သင့်ကို ဆက်သွယ်ပြောဆိုစေလိုသည့် ဦးစားပေးနည်းလမ်းများကို သတ်မှတ်ပုံ သို့မဟုတ် ပြောင်းပုံကို လေ့လာရန် ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ၏ “သင်၏ ရွေးချယ်မှုများ” ကဏ္ဍကို ကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အချို့သော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သင့်အချက်အလက်များကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများထံ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါသည်-
ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးရေး ကုမ္ပဏီများ- ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စား ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ရန် သို့မဟုတ် သင့်ထံ ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီပေးရန် အခြားကုမ္ပဏီများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ သို့မဟုတ် ကန်ထရိုက်တာများ (“ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးရေး ကုမ္ပဏီများ)ကို အသုံးပြုပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ ကြော်ငြာခြင်း၊ ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုများ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံနှင့် IT ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို တစ်ဦးချင်းစိတ်ကြိုက် ပြုလုပ်ပေးရန်နှင့် အကောင်းဆုံး ချိန်ညှိရန်၊ ခရက်ဒစ်ကတ်ဖြင့် ငွေသွင်းငွေထုတ်မှုများ သို့မဟုတ် အခြားငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းများကို စီမံဆောင်ရွက်ရန်၊ ဖောက်သည် ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးပေးရန်၊ အကြွေးများ တောင်းခံရယူရန်၊ ဒေတာများ(သုံးစွဲသူ၏ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများဆိုင်ရာ ဒေတာများ အပါအဝင်)ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် သုံးစွဲသူ စစ်တမ်းများကို စီမံဆောင်ရွက်၍ ခန့်ခွဲရန် ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးရေး ကုမ္ပဏီများနှင့် ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ပါသည်။ အဆိုပါ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးရာတွင် ဤဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးရေး ကုမ္ပဏီများသည် သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် အခြားအချက်အလက်များကို ဝင်ရောက်သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်များမှလွဲ၍ သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို အသုံးပြုရန် သို့မဟုတ် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန် ၎င်းတို့ကို ခွင့်ပြုမထားပါ။
အရောင်းမြှင့်တင်မှု ကမ်းလှမ်းချက်များ- ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်တွဲ၍ အရောင်းမြှင့်တင်မှုများ သို့မဟုတ် အစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ၎င်းတို့တွင် သင် ပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် သင့်အချက်အလက်များကို အဆိုပါ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မျှဝေရန် လိုပါသည်။ ဤကဲ့သို့ အရောင်းမြှင့်တင်မှု အမျိုးအစားများကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မက်လုံးအဖြစ် ဆုကြေးပေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သင့်အမည်နှင့် အခြားအချက်အလက်များကို မျှဝေနိုင်ပါသည်။ ဤပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဆောင်ရွက်ချက်များအတွက် တာဝန်ရှိကြောင်း သတိပြုပါ။
Goama|Games နှင့် အခြားအရာများကို ကာကွယ်ခြင်း- Goama|Games နှင့် ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးရေး ကုမ္ပဏီများက (က) သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ ဥပဒေရေးရာ ဆောင်ရွက်ချက် သို့မဟုတ် အစိုးရ၏ တောင်းဆိုချက်ကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ (ခ) ဖြစ်လာနိုင်သည့် စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ သုံးစွဲမှု စည်းမျဉ်းများကို ပြဋ္ဌာန်းရန်၊ (ဂ) တရားမဝင်သော သို့မဟုတ် တရားမဝင်ဟု သံသယရှိသော လုပ်ဆောင်ချက်များ (ငွေပေးချေရာတွင် လိမ်လည်မှု အပါအဝင်)၊ လုံခြုံရေး သို့မဟုတ် နည်းပညာ ပြဿနာများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်၊ တားဆီးရန် သို့မဟုတ် တစ်နည်းအားဖြင့် ဖော်ထုတ်ဖြေရှင်းရန် သို့မဟုတ် (ဃ) ဥပဒေက သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုသည့်အတိုင်း Goama|Games၊ ၎င်း၏ အသုံးပြုသူများ သို့မဟုတ် အများပြည်သူ၏ အခွင့်အရေးများ၊ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် လုံခြုံရေးတွင် အန္တရာယ်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးရန်အတွက် သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များနှင့် အခြားအချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန် လိုအပ်သည်ဟု ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ယုံကြည်ပါက ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည် သို့မဟုတ် အခြားတစ်နည်းအားဖြင့် အဆိုပါ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
လုပ်ငန်း လွှဲပြောင်းမှုများ- ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမှု၊ ပြန်လည်တည်ဆောက်မှု၊ လုပ်ငန်းပေါင်းစည်းမှု သို့မဟုတ် ရောင်းချမှု သို့မဟုတ် အခြား ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်းမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လက်ခံသည့် အဖွဲ့က ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒနှင့်အညီ သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို အလေးထား ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူမှသာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များ အပါအဝင် အချက်အလက်များကို လွှဲပြောင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။
အချက်အလက်များ မျှဝေရာတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဥရောပ စီးပွားရေး ဒေသပြင်ပရှိ နိုင်ငံများနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော ဒေတာကာကွယ်ရေး ဥပဒေများရှိသည့် အခြားဒေသများသို့ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို လွှဲပြောင်းသည့်အခါတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒနှင့်အညီ၊ သက်ဆိုင်သည့် ဒေတာ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေများက ခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်း အချက်အလက်များကို လွှဲပြောင်းကြောင်း သေချာအောင် ဆောင်ရွက်ပါမည်။
သင်သည် သင့်အချက်အလက်များကို အောက်ပါနည်းလမ်းများအတိုင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်လည်း ရွေးချယ်နိုင်သည်-
Goama|Games ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေစဉ် သင်သည် သုံးသပ်ချက်များ သို့မဟုတ် အခြားအချက်အလက်များကို လူအများသိအောင် ပို့စ်တင်နိုင်သည့် အခွင့်အရေးများ ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး သင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားသည့် အချက်အလက်များကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများက အသုံးပြုနိုင်ပါသည်၊
ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ဆောင်မှု၏ အပိုင်းအချို့တွင် သင်၏ စမတ်ကိရိယာရှိ ကလိုင်းယင့်များနှင့် အပလီကေးရှင်းများကို သုံး၍ အီးမေးလ်၊ စာသား မက်ဆေ့ချ်နှင့် လူမှု အပလီကေးရှင်း သို့မဟုတ် အခြားမျှဝေမှု အပလီကေးရှင်းများဖြင့် အချက်အလက်များကို မျှဝေရန် ရွေးချယ်ခွင့်ပေးသည့် တူးလ်တစ်ခု ပါဝင်နိုင်သည်၊
လူမှုရေး ပလတ်အင်များ (Facebook၊ Twitter၊ Pinterest နှင့် Google မှ ပံ့ပိုးပေးသည့် ပလတ်အင်များ အပါအဝင်) သည် သင့်ကို အဆိုပါ ပလတ်ဖောင်းများတွင် အချက်အလက်များ မျှဝေခွင့်ပြုပါသည်။
လူမှုရေး ပလတ်အင်များနှင့် လူမှုရေး အပလီကေးရှင်းများကို လူမှုကွန်ရက်များက ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ပြီး ၎င်းတို့၏ သုံးစွဲမှု စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒများကို လိုက်နာရပါသည်။
သင့်အကောင့်နှင့် ပရိုဖိုင်များသို့ ဝင်ရောက်သုံးစွဲခွင့်
သင့်အကောင့်ကို အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်သုံးစွဲခွင့် ပေးရန်နှင့် Goama|Games ဝန်ဆောင်မှုကို ကူညီစီမံခန့်ခွဲပေးနိုင်ရန် Goama|Games ဝန်ဆောင်မှုကို သင် ပြန်လည်လာရောက်သုံးစွဲချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကို အကောင့်ပိုင်ရှင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပြီး စကားဝှက် သို့မဟုတ် အခြားသုံးစွဲသူ အထောက်အထား တစ်ခုမျှ ပြန်ရိုက်ထည့်စရာ မလိုဘဲ သင့်အကောင့်သို့ တိုက်ရိုက် ဝင်ရောက်သုံးစွဲနိုင်စေသည့် နည်းပညာကို အသုံးပြုပါသည်။ ဝဘ်ဆိုက်ထဲ လော့ဂ်အင်ဝင်ချိန်တွင် “ဤစက်တွင် ကျွန်ုပ်ကို မှတ်ထားပါ” အကွက်ကို မရွေးချယ်တော့ခြင်းဖြင့် သင့်ကွန်ပျူတာတွင် ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးမပြုတော့ရန် ရွေးချယ်နိုင်သည်။
သင့်အကောင့်ကို အခြားသူများနှင့် မျှဝေလိုက်ပါက သို့မဟုတ် အခြားတစ်နည်းအားဖြင့် သင့်အကောင့်ကို ဝင်ရောက်သုံးစွဲခွင့်ပေးလိုက်ပါက ၎င်းတို့သည် သင်၏ ကစားမှု မှတ်တမ်း၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ သုံးသပ်ချက်များနှင့် အကောင့် အချက်အလက်များ (သင့်အီးမေးလ် လိပ်စာ သို့မဟုတ် သင့်အကောင့်ရှိ အခြားအချက်အလက်များ အပါအဝင်) ကဲ့သို့ သင့်အချက်အလက်များ (ကိစ္စရပ်အချို့တွင် ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များ အပါအဝင်)ကို ကြည့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင်သည် အီးမေးလ် သို့မဟုတ် စာသား မက်ဆေ့ချ်မှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှု အချို့ကို လက်ခံလိုခြင်း မရှိတော့ပါက ကျွန်ုပ်တို့ ဝဘ်ဆိုက်၏ “သင့်အကောင့်” ကဏ္ဍရှိ အီးမေးလ်နှင့် စာသား မက်ဆေ့ချ်များ ဆက်တင် စာမျက်နှာသို့ ဝင်ရောက်၍ စာရင်းသွင်းမှုကို ပယ်ဖျက်ပါ။ နောက်တစ်နည်းအားဖြင့် အီးမေးလ်ထဲရှိ “စာရင်းသွင်းမှု ပယ်ဖျက်ရန်” လင့်ခ်ကို နှိပ်ပါ သို့မဟုတ် စာသားမက်ဆေ့ချ်ဖြင့် ရပ်မည်ဟု စာပြန်ပါ (သို့မဟုတ် အခြားညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ)။ သင်သည် သင့်အကောင့်ဖြင့် ငွေလွှဲပြောင်းမှုများအကြောင်း မက်ဆေ့ချ်များကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ အီးမေးလ်ဖြင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုသည့် အကြောင်းအရာအချို့ကို စာရင်းသွင်းမှုမှ မပယ်ဖျက်နိုင်ကြောင်း သတိပြုပါ။
သင်သည် Goama|Games မှ ပေးပို့သော အသိပေးချက်များကို လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤအသိပေးချက်များကို လက်မခံလိုပါက ၎င်းတို့ကို ပိတ်ရန် သင့်မိုဘိုင်းကိရိယာ၏ ဆက်တင် လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် သတ်မှတ်ထားသည့် ကွတ်ကီးများအပြင် အခြားသော အွန်လိုင်း ခြေရာခံမှုနှင့် အင်တာနက် ကြော်ငြာ အမျိုးအစားများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရွေးချယ်မှုများ ပြုလုပ်ရန် ကွတ်ကီးများနှင့် အင်တာနက် ကြော်ငြာ ကဏ္ဍ(အောက်ပါ)ကို ကြည့်ပါ။
သင်၏ အချက်အလက်များနှင့် အခွင့်အရေးများ
သင်သည် သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို ဝင်ရောက်သုံးစွဲရန် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့က သင်နှင့် ပတ်သက်၍ ထိန်းသိမ်းထားသည့် ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သော သို့မဟုတ် မှားယွင်းသော အချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ပေးရန် သို့မဟုတ် အပ်ဒိတ်လုပ်ပေးရန် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ရှိ “သင့်အကောင့်" သို့ သွားရောက်ပြီး ယင်းကို အလွယ်ကူဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ထိုနေရာတွင် သင်သည် သင်၏ အဆက်အသွယ် အချက်အလက်များနှင့် သင်၏ Goama|Games ငွေပေးချေမှု အချက်အလက်များ အပါအဝင် သင့်အကောင့်နှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက် အမျိုးမျိုးကို ဝင်ရောက်သုံးစွဲ၍ အပ်ဒိတ်လုပ်နိုင်သည်။ “သင့်အကောင့်” ကို ဝင်ရောက်သုံးစွဲရန် လော့ဂ်အင်ဝင်ရမည်။ သင်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းသိမ်းထားသည့် ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို ဖျက်ပစ်ပေးရန်လည်း သင် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
တောင်းဆိုချက်များ ပြုလုပ်လိုပါက သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခြားမေးမြန်းလိုသည်များ ရှိပါက support@gogamesapp.com တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ။ ထို့ပြင် သင့်အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ် ရွေးချယ်မှုများကို သိရှိလိုပါက ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ၏ သင်၏ ရွေးချယ်မှုများ ကဏ္ဍကို ကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်တွေ့မကျလွန်းသော၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လွန်ကဲသော ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို လိုအပ်နိုင်သည့် သို့မဟုတ် အခမဲ့ အစမ်းသုံးခွင့် လိမ်လည်မှုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များ ဖြစ်စေနိုင်သည့် အရာများ အပါအဝင် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု မရှိသော သို့မဟုတ် ဥပဒေအရ မလိုအပ်သော တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ရွေးချယ်မှုများကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျသင့်ငွေ တောင်းခံမှု သို့မဟုတ် မှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်းမှု ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်နှင့် ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒတွင် ဖော်ပြထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရန် အပါအဝင် လိုအပ်သည့်အတိုင်း သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်သော ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများက ခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်း အချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များ ဆုံးရှုံးမှု၊ ခိုးယူခံရမှု၊ ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ ဝင်ရောက်သုံးစွဲမှု၊ အသုံးပြုမှုနှင့် မွမ်းမံပြင်ဆင်ခံရခြင်း မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ရန် သင့်လျော်သော စီမံခန့်ခွဲမှုများ၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များကို အသုံးပြုပါသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့် မည်သည့်ဆောင်ရွက်ချက်ကမျှ 100% အပြည့်အဝ လုံခြုံမှု ပေးနိုင်သည်ဟု အာမမခံနိုင်ပါ။ သို့ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အချက်အလက်များ၏ လုံခြုံရေးကို အာမမခံနိုင်ပါ။
အခြားဝဘ်ဆိုက်များ၊ ပလတ်ဖောင်းများနှင့် အပလီကေးရှင်းများ
Goama|Games ဝန်ဆောင်မှုကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ပလတ်ဖောင်းများမှတစ်ဆင့် ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည် နှင့်/သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ပလတ်ဖောင်းများက လည်ပတ်လုပ်ဆောင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို အသုံးပြုနိုင်သည် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် မတူညီသော အချက်အလက်များ စီမံဆောင်ရွက်သည့် မူဝါဒများ ရှိသည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများက လုပ်ဆောင်သော ဝဘ်ဆိုက်များသို့ လင့်ခ်များ ပါဝင်နိုင်သည်။ ဥပမာ သင်သည် ဂိမ်းစနစ်များ၊ စမတ် TV များ၊ မိုဘိုင်းကိရိယာများ၊ ရုပ်သံဖမ်းစက်များနှင့် အခြားအင်တာနက် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကိရိယာများစွာကဲ့သို့ ပလတ်ဖောင်းများမှတစ်ဆင့် Goama|Games ဝန်ဆောင်မှုကို ဝင်ရောက်သုံးစွဲနိုင်သည်။ ဤဝဘ်ဆိုက်များနှင့် ပလတ်ဖောင်းများတွင် သီးခြားဖြစ်၍ ဆက်စပ်ခြင်းမရှိသည့် ကိုယ်ရေး လုံခြုံမှု သို့မဟုတ် ဒေတာ မူဝါဒများ၊ ကိုယ်ရေး လုံခြုံမှု မူဝါဒများ၊ အသိပေးချက်များနှင့် သုံးစွဲမှု စည်းမျဉ်းများ ရှိသည့်အတွက် ၎င်းတို့ကို သေချာဖတ်ရှုရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုပါသည်။ ထို့ပြင် သင်သည် Goama|Games ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပြန်လှန်တုံ့ပြန် ဆောင်ရွက်သည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း အပလီကေးရှင်းများကို တွေ့ကြုံနိုင်ပါသည်။
သင်သည် Goama|Games ဝန်ဆောင်မှုများတွင် စာရင်းသွင်းရန် အသက် 18 နှစ်နှင့် အထက် ရှိရမည်။ အချို့သော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် နယ်မြေများတွင် အရွယ်ရောက်သည့် အသက်သည် 18 နှစ်ထက် ပိုကြီးပါက အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ရန် ထိုအသက်ကို ပြည့်ပြီးဖြစ်ရမည်။ အသက် 18 နှစ်အောက် လူငယ်များသည် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း မိဘ သို့မဟုတ် တရားဝင် အုပ်ထိန်းသူ၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှု၊ ကြီးကြပ်မှုနှင့် ခွင့်ပြုချက်ရှိမှသာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒတွင် ပြောင်းလဲမှုများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥပဒေဆိုင်ရာ၊ စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒကို အခါအားလျော်စွာ အပ်ဒိတ်လုပ်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အဆိုပါ ပြောင်းလဲမှု မှန်သမျှအကြောင်း (၎င်းတို့ စတင်အကျိုးသက်ရောက်မည့် အချိန်အပါအဝင်) ကို ဥပဒေနှင့်အညီ အသိပေးသွားပါမည်။ ယင်းကဲ့သို့ အပ်ဒိတ်များ စတင်အကျိုးသက်ရောက်ပြီးနောက် Goama|Games ဝန်ဆောင်မှုကို သင် ဆက်လက် အသုံးပြုခြင်းသည် အဆိုပါ ပြောင်းလဲမှုများကို သင် လက်ခံရာရောက်ပါသည်။ ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ၏ အပ်ဒိတ်များကို သင် လက်မခံပါက Goama|Games ဝန်ဆောင်မှုများအား အသုံးပြုမှုကို ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။
ကွတ်ကီးများနှင့် အင်တာနက် ကြော်ငြာ
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးရေး ကုမ္ပဏီများသည် ရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုးအတွက် ကွတ်ကီးများနှင့် အခြားနည်းပညာများ (ဝဘ်ဘီကွန်များကဲ့သို့) ကို အသုံးပြုပါသည်။ ဥပမာ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကို မှတ်သားထားခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများထံ သင် ပြန်လည် လာရောက်ချိန်တွင် အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်သုံးစွဲနိုင်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးရန်နှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူများနှင့် ၎င်းတို့ စိတ်ဝင်စားနိုင်သည့် အရာများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရန်နှင့် ဈေးကွက်ရှာဖွေမှု အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ကြော်ငြာတို့ကို ပေးပို့၍ အံဝင်ခွင်ကျ စီမံရန် ကွတ်ကီးများနှင့် အခြားနည်းပညာများကို အသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့၏ ဤနည်းပညာများ အသုံးပြုမှုအကြောင်းကို အသိပေးလိုပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဤအကြောင်းကြားစာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုသည့် နည်းပညာ အမျိုးအစားများ၊ ၎င်းတို့က လုပ်ဆောင်သည့် အရာများနှင့် ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ ရွေးချယ်စရာများကို ရှင်းပြထားပါသည်။
ကွတ်ကီးများဆိုသည်မှာ ဝဘ်ဆိုက်များနှင့် အွန်လိုင်း ဝန်ဆောင်မှုများကို သင် ကြည့်ရှု၍ အသုံးပြုသောအခါ သင့်စက်ပေါ်တွင် အများအားဖြင့် သိမ်းဆည်းထားသည့် ဒေတာဖိုင် အသေးလေးများ ဖြစ်ပါသည်။ ဝဘ်ဆိုက် အလုပ်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် ပိုမိုထိရောက်ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အပြင် အစီရင်ခံစာ အချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန်နှင့် တစ်ဦးချင်း စိတ်ကြိုက် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း သို့မဟုတ် ကြော်ငြာပြသခြင်းတို့တွင် ကူညီရန် ၎င်းတို့ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုပါသည်။
ကွတ်ကီးများသည် ဤလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ဖြစ်မြောက်စေသည့် တစ်ခုတည်းသော နည်းပညာ အမျိုးအစားများ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြား အလားတူ နည်းပညာ အမျိုးအစားများကိုလည်း အသုံးပြုပါသည်။ နောက်ထပ် အချက်အလက်များနှင့် ဥပမာများကို သိရှိရန် အောက်တွင်ကြည့်ပါ။
Goama|Games က ကွတ်ကီးများကို ဘာကြောင့် အသုံးပြုသလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးရေး ကုမ္ပဏီများသည် အောက်ပါ ကွတ်ကီးအမျိုးအစားများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်-
မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော ကွတ်ကီးများ- ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် အွန်လိုင်း ဝန်ဆောင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးရန် ဤကွတ်ကီးများကို မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာ ကျွန်ုပ်တို့ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးရေး ကုမ္ပဏီများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့ဝင်များကို ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင်များက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်များနှင့် အပလီကေးရှင်းများကို အသုံးပြုချိန်တွင် ၎င်းတို့ကို စစ်မှန်ကြောင်း အတည်ပြု၍ မည်သူမည်ဝါ ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် ဤကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲမှု စည်းမျဉ်းများကို ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန်၊ လိမ်လည်မှုကို တားမြစ်နိုင်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှု လုံခြုံမှုရှိနေအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီပေးပါသည်။
စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ကွတ်ကီးများ- ဤကွတ်ကီးများကို မရှိမဖြစ် မလိုအပ်သော်လည်း Goama|Games တွင် သင်၏ အွန်လိုင်း သုံးစွဲမှု အတွေ့အကြုံကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပေးပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် မြှင့်တင်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီပေးသည်။ ဥပမာ- ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သင်၏ နှစ်သက်မှုများကို ကူညီမှတ်သားပေးပြီး သင် ယခင်က ပေးထားသည့် (ဥပမာ- အဖွဲ့ဝင် စာရင်းသွင်းစဉ်အတွင်း) အချက်အလက်များကို ပြန်ရိုက်ထည့်စရာ မလိုအောင် လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် အဆင့်မြှင့်တင်ရန်၊ တစ်ဦးချင်းစိတ်ကြိုက် ပြုလုပ်ပေးရန်နှင့် ဈေးကွက် သုတေသနလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ကို လာရောက်သူများ၏ Goama|Games ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ (လူကြိုက်များသော စာမျက်နှာများ၊ ပြောင်းလဲမှု နှုန်းများ၊ ကြည့်ရှုမှု ပုံစံများ၊ ကလစ်နှိပ်မှုနှင့် အခြားသော အချက်အလက်များကဲ့သို့)ကို စုစည်းရယူရန် ဤကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤကွတ်ကီးများကို ဖျက်ပစ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအပေါ် အကန့်အသတ် ဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကြော်ငြာ ကွတ်ကီးများ- ဤကွတ်ကီးများသည် သင်နှင့် ပိုမိုသက်ဆိုင်သည့် ကြော်ငြာများကို ပေးပို့ရန် သင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့် စာမျက်နှာများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို သင် အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် ကြော်ငြာများနှင့် အီးမေးလ်များအပေါ် သင်၏ တုံ့ပြန်မှုကဲ့သို့ ဤဝဘ်ဆိုက်နှင့် အခြားဝဘ်ဆိုက်များသို့ သင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ကြော်ငြာအမျိုးအစားများကို “စိတ်ဝင်စားမှုကိုလိုက်၍ ကြော်ငြာခြင်း” ဟု ခေါ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကြော်ငြာကွတ်ကီးများစွာကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးရေး ကုမ္ပဏီများက ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။
Goama|Games က ဝဘ်ဘီကွန်များနှင့် အခြားနည်းပညာများကို ဘယ်လို အသုံးပြုသလဲ။
(ကြည်လင်သော gif ပုံများ သို့မဟုတ် ပစ်ဇယ်တဂ်များဟုလည်း သိကြသည့်) ဝဘ်ဘီကွန်များသည် အများအားဖြင့် ကွတ်ကီးများနှင့် တွဲဖက်လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးရေး ကုမ္ပဏီများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှု သုံးစွဲပုံကို နားလည်ရန်နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် အဆင့်မြှင့်တင်ရန်၊ ဝဘ်ဆိုက် စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်စေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူ၏ ဒေတာသုံးစွဲမှုနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဈေးကွက်ရှာဖွေမှု လုပ်ဆောင်ချက်များ (ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဝဘ်ဆိုက်များရှိ အီးမေးလ်နှင့် အွန်လိုင်းကြော်ငြာများ အပါအဝင်) အပေါ် တုံ့ပြန်မှုများကို နားလည်ရန် စသည်ဖြင့် ကွတ်ကီးများကဲ့သို့ အလားတူ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အများအားဖြင့် ဝဘ်ဘီကွန်များသည် ကွတ်ကီးများနှင့် မကြာခဏ တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သောကြောင့် ကွတ်ကီးများကို ငြင်းပယ်ခြင်းသည် ဝဘ်ဘီကွန်များ၏ ထိရောက်မှုကို ထိခိုက်စေပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘရောက်ဇာ သိုလှောင်မှုနှင့် ပလတ်အင်များကဲ့သို့ ကွတ်ကီးများနှင့် အလားတူသော အခြားနည်းပညာများကို အသုံးပြုပါသည်။ ကွတ်ကီးများကဲ့သို့ပင် ဤနည်းပညာအချို့သည် သင့်စက်တွင် ဒေတာအနည်းငယ်ကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းမျဉ်းများကို ပြဋ္ဌာန်းရန်၊ လိမ်လည်မှုကို တားမြစ်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို သုံးစွဲမှုအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် စသည်ဖြင့် ကွတ်ကီးများ၏ ရည်ရွယ်ချက်များနည်းတူ ဤနည်းပညာများနှင့် အခြားသော နည်းပညာများစွာကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤနည်းပညာများနှင့် ပတ်သက်၍ ရွေးချယ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများစွာ ရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် လူသုံးများသော ဘရောက်ဇာများစွာသည် ဘရောက်ဇာတွင် သိုလှောင်ထားသည်များကို ရှင်းပေးနိုင်စွမ်းရှိပြီး ၎င်းကို ဆက်တင် သို့မဟုတ် နှစ်သက်မှုများ သတ်မှတ်သည့်နေရာများတွင် အများအားဖြင့် တွေ့နိုင်သည်။ နောက်ထပ်သိရှိလိုပါက သင့်ဘရောက်ဇာ၏ အကူအညီ လုပ်ဆောင်ချက် သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးမှု အပိုင်းကို ကြည့်ပါ။ Silverlight သိုလှောင်မှုကဲ့သို့ အခြားနည်းပညာများကို အပလီကေးရှင်းအတွင်းမှ ရှင်းပစ်နိုင်သည်။
မူပိုင်ခွင့် အားလုံးကို လက်ဝယ်ထားရှိသည်